Flash Storage သည်အလွန်စျေးကြီးသလား။ ထပ်မံစဉ်းစားပါ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Flash ကိုသိုလှောင်အရမ်းစျေးကြီးသည်ထင်ကြသလော ထပ်ပြီးစဉ်းစား
Flash ကိုသိုလှောင်အရမ်းစျေးကြီးသည်ထင်ကြသလော ထပ်ပြီးစဉ်းစား
ဂျေဆန် Coari, ကို Global ဒါရိုက်တာ, ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဖြေရှင်းချက်စျေးကွက်မှာ ကွမ်တမ်
လူတိုင်းကို flash ထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်မနှုတ်နိုင်ကြောင်းသဘောတူ။ အခြို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် Workflows အဘို့, စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ အယ်ဒီတာများ compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K (သို့မဟုတ် ပို. ပို. မကြာခဏ 8K) ဗီဒီယိုမြောက်မြားစွာစီးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသည့်အခါဥပမာ, flash ပါအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်တုံ့ပြန်မှုအတွေ့အကြုံမျိုးကိုပေးနိုင်ပါသည်။
သို့သျောလညျးကို flash နည်းပညာအရမ်းစျေးကြီးသောမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ပြန့်ယုံကြည်မှုလည်းမရှိ။ ဘယ်တော့လဲ ကွမ်တမ် စစ်တမ်းကောက်ယူဗီဒီယိုအားပညာရှင်များ - မြောက်အမေရိက, ဥရောပနှင့်အာရှတလွှား Post-ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ, ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ, ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီများ, စတူဒီယိုနဲ့ content ပေးပို့ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အထိ - ပိုဖြေဆိုသူထက်ဝက်ကျော်ကို flash-based ဖြေရှင်းချက်စေလွှတ်နိုင်ရန်မူလတန်းအားနည်းချက်အဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပြသည်။
ဤသည်သာတစိတ်တပိုင်းအမှန်တရား, သာ သို့ဖြစ်. တစ်ဝက်သောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသာ SSD ကို-based ဖြေရှင်းချက် vs. HDD-based များအတွက်စွမ်းရည် ($ / တီဘီ) အားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ဈေးနှုန်းအချက်များကိုစဉ်းစားသည့်အခါတစ်ဦး All-flash ကိုသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ကိုပိုပြီးစျေးကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၏ကုန်ကျစရိတ်။ သို့သော်ပိုင်ဆိုင်မှု (TCO) ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သိပ်သည်းဆ, flash storage ၏ဘောဂဗေဒနှင့်အထူးသဖြင့် Non-မတည်ငြိမ်သောမှတ်ဉာဏ် express ကို (NVMe) ကို flash storage ကိုဖော်ပြခြင်းမအတွက် factored သောအခါဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာ - NVMe ကဘာလဲ?
NVMe ၏နိဒါန်းသည်အထိအများစု flash ကို-based သိုလှောင်မှု - ထိုသို့သော Solid-state drives (SSDs) အဖြစ် - ကွန်ပျူတာစနစ်၏ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူသိုလှောင်မှုချိတ်ဆက်ဖို့ SATA သို့မဟုတ် SAS နည်းပညာများကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် SATA နဲ့ SAS စပိုင်းတွင် (HDDs) hard disk ကို drives တွေကိုပံ့ပိုးပေးရန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူအသစ်များ, ပိုမိုမြန်ဆန် flash ကို-based drives တွေကိုတီထွင်အဖြစ်ဤအဟောင်းတွေနည်းပညာများအဆိုပါ SSDs များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
NVMe အထူး flash ကို-based သိုလှောင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ NVMe နှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ CPU core ကိုအစားပိုမိုနှေးကွေး SATA သို့မဟုတ် SAS interface ကို၏မြန်နှုန်းမြင့် PCIe ဘတ်စ်ကားသုံးပြီးသိုလှောင်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်။ PCIe အသုံးပြုခြင်း, flash ပါ-based drives တွေကိုအစားရိုးရာ HDDs ၏မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူတန်းတူလုပ်ဆောင်။ NVMe SATA သို့မဟုတ် SAS protocols များထက်, ပိုမိုမြင့်မားတန်းစီနှုန်းအများအပြားပိုပြီးပညတ်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများရှိရရှိ။ SATA နဲ့ SAS တစ်ခုချင်းစီကိုအသီးသီး 32 နှင့် 254 ပညတ်တော်တို့ကိုအထိကိုင်တွယ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော command ကိုစီတန်းရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, NVMe 65,000 နှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 65,000 စီတန်းတန်းစီနှုန်းအားပညတ်တော်မူ၏ထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။
SATA နဲ့ SAS နှင့်နှိုင်းယှဉ် NVMe သိသိသာသာပိုမြန်ကျပန်းဖတ်တောင်းဆိုမှုများနိုင်ပါတယ်။ NVMe ကျပန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 သန်းကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50,000 နှင့် SAS ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 200,000 ကျပန်းတစ်စက္ကန့်ဖတ်မှာ SATA နဲ့နှိုင်းယှဉ်, တစ်စက္ကန့်ဖတ်။ ထိုအပင်သူအပေါငျးတို့ဖတ်နှင့်အတူ NVMe SATA နဲ့ SAS များအတွက် 20 microseconds အောက်မှာနှင့်နှိုင်းယှဉ် 500 microseconds အောက်မှာအောင်းနေချိန်စောင့်ရှောက်။ သူတို့အဘို့
ဒေတာ, SSDs သိသိသာသာ outperform HDDs ၏အပြိုင်စီးလိုအပ်မျိုးစုံ clients များပံ့ပိုးပေးရန်သိုလှောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။
NVMe လည်းကွန်ရက်တစ်ခုကျော်ခြွင်းချက်ဖြင့်ကယ်မနှုတ်နိုင်။ အားဖြင့်အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ကွမ်တမ်, NVMe သိုလှောင်မှုထက်ပို 10 ကြိမ်ဖတ်ပြီးသားမကယ်မလွှတ်နဲ့ NFS များနှင့် SMB ပူးတွဲ clients များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတစ်ခုတည်းကို client ဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရေးသားဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
NVMe အသုံးပြုသူများက flash ကို၏စစ်မှန်တဲ့အလားအလာသော့ဖွင့်ဖို့မသာပေမယ့် TCO လျှော့ချနေချိန်မှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့် flash ကိုနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ တန်းစီနှုန်းကပိုပညတ်တော်တို့ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများ, ပိုမြန်, အောက်ပိုင်းအောင်းနေချိန်နှင့်ခြွင်းချက်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ကာဆွဲဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်တန်ဖိုးအားသာချက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ NVMe enable ဖတ်တယ်။
အတိတ်ကာလများတွင်ကွန်ယက်သိုလှောင်မှုအတွက် flash ကို အသုံးပြု. အဖွဲ့အစည်းများက high-performance ကို Fiber Channel ကိုဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလက်လှမ်းကုန်ကျခဲ့သည်။ ကွန်ယက်အဖွဲ့ပုံမှန်အားသိုလှောင်မှုမီဒီယာပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးစရိတ်ဖြစ်ပြီး, Fiber Channel ကိုကွန်ရက် Ethernet ထက်သုံးလေးဆပိုစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်။
NVMe နှင့်အတူ, အဖွဲ့အစည်းများအများကြီးပိုကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော Ethernet နည်းပညာကို အသုံးပြု. Fiber Channel ကိုကဲ့သို့စွမ်းဆောင်မှုမှီနိုင်ပါ။ Ethernet ဟာစီမံခန့်ခွဲမှု Fiber Channel ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏အထူးပြုကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူးကတည်းက Ethernet နည်းပညာ, အသုံးပြုသူများကပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ဒါပေမယ့်လည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်မသာပိုက်ဆံကယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Ethernet ကို အသုံးပြု. networking အပေါ်ဒေါ်လာများ - သို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပင်ရာပေါင်းများစွာ - အဖွဲ့အစည်း၏အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်. ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီကယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
တစ်ဦးတည်းသူများသည်ငွေစုမကြာခဏ NVMe သိုလှောင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထေမိ။
NVMe စဉ်းစားတဲ့အခါ, ကအားလုံးကိုသို့မဟုတ်ဘာမျှမဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး
အားလုံး NVMe သို့မဟုတ်ဘာမျှမ - ကလူ NVMe စဉ်းစားတဲ့အခါ, သူတို့မကြာခဏအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ကြည့်ရှုရန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စူးစမ်းခံရဖို့တစ်ကျယ်ပြန့်မီးခိုးရောင်ဧရိယာရှိပါတယ်။ ယင်း၏လေးရယ်အလားအလာမှမဆိုအဆင့်မြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်းမောင်းသောအင်ဂျင် software ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မီဖိုင်စနစ်နှင့်ဒေတာများစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ NVMe သိုလှောင်မှုအကောင်အထည်ဖော်တစ်ခုတည်း, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ namespace နဲ့ Multi-tier သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကယ်မနှုတ်နိုင်။ disk ကို-based Array ကို, တိပ်ခွေစာကြည့်တိုက်များ, နဲ့ cloud storage ကိုအပါအဝင် - - အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာအားသာချက်ယူပြီးစဉ်အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုလိုအပ် NVMe သိုလှောင်မှုသာပမာဏကိုယ်ယူနိုင်ပါသည်စွမ်းဆောင်ရည်၏တူညီသောအဆင့်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်။ နေဆဲအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနေချိန်မှာဟိုက်ဘရစ်သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖန်တီးရန်ဤစွမ်းရည်, အဖွဲ့အစည်းများကပိုစျေးကြီးကို flash-based သိုလှောင်မှု၎င်းတို့၏ဝယ်ယူ minimize လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
4K ယခုခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် 8K လျင်မြန်စွာသစ်ကိုစံဖြစ်လာနှင့်အတူ, အမြော်အမြင်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးတစ်နည်းနည်းယနေ့အနာဂတ်မှာကြီးမားတဲ့ငွေစုအသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မယ်။ Flash ကို-based သိုလှောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုယနေ့ 4K ပုံစံများကိုထောကျပံ့ဖို့စွမ်းရည်များကိုပေးစွမ်းအဖြစ်အနာဂတ်မှာသူတို့အပါအဝင်
8K နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။ သူတို့ရဲ့သိုလှောင်မှုဗိသုကာကိုထောကျပံ့ဖို့ကို flash-based နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများကောင်းစွာလက်ရှိနှင့်နောက်မျိုးဆက် NVMe နည်းပညာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် positioned ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအစနစ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်အတိုင်း, တန်ဖိုးလျော့ကုန်ကျစရိတ်လျော့ကျပါလိမ့်မယ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်အများကြီးရှေ့ဆက်သွားအောင်။
flash ကို-based သိုလှောင်မှုများရိပ်မိမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် flash ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဖြန့်ကျက်ကန့်သတ်ထားသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ပြီအဖွဲ့အစည်းများအဘို့ငါအောက်ပါမေးခွန်းများကိုရှိုးမယ်လို့:
တစ်ဦး HDD စနစ်ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ·ကုန်ကျစရိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒေတာစင်တာကုန်ကျစရိတ်, ဝန်ထမ်းများကုန်ကျစရိတ်, တန်ဖိုးလျော့ကုန်ကျစရိတ်နှင့် Networking ကုန်ကျစရိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါသလား
· client ကိုတစ်ဦးလျှင်စွမ်းဆောင်ရည်မဟုတ်ဘဲစွမ်းရည်များအတွက်ပေးဆောင်လျက်ရှိစျေးနှုန်းကဘာလဲ?
မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်ရှိနေသော်လည်း, ဒါပေမယ့်ကြောင့်ထိုသို့ပြု၏ - ပိုပြီးနက်ရှိုင်းတွင်ဤမေးခွန်းများကိုစူးစမ်းစေလွှတ် NVMe အဖြေကိုကြောင်းကိုရှာဖွေရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံအမှန်တရားကယ့်ကိုအသေးစိတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျေဆန် Coari အကြောင်း
ဂျေဆန် Coari, ကို Global ဒါရိုက်တာ, ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဖြေရှင်းချက်စျေးကွက့်မှာ ကွမ်တမ်, ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာရောင်းချသူမှာအကြီးတန်းအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရာထူးအတွက်အတွေ့အကြုံထက်ပို 20 နှစ်ပေါင်းနှင့်တကွ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဝါရင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေဆန်အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့စကေးထွက်သိုလှောင်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမဟာဗျူဟာစေပါတယ်။ ယခင်ကသူအများဆုံးအထူးသ HPC ထုတ်ကုန်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ directing နှင့်ဥရောပနှင့်ပွေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်းများဦးဆောင် SGI မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-06-10
ယခင်: ကံကောင်းဖင်လန် Productions ပါဝါအထောက်မှ Indipro Tools များအသုံးပြုမည်
နောက်တစ်ခု: ATSC 3.0: အဆိုပါရာတွင်တော်လှန်ရေးကောင်စီနိုင်သည့်အလားအလာ,